Homeसमाचार‘सक्किगोनि’मा भुत बनेकी गरिमा शर्मा मिडियामा, रियलमा झनै राम्री भनिन्- यति राम्रो भुत त देखेकै थिईन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 20, 2020 admin समाचार 8722
चितवनकी गरिमा शर्मा टिक’टकबाट चर्चामा आईन् । उनको कला र सौन्दर्यको सबैले ता’रिफ गर्छन् । सानो उमेरमै टिकटक हुँदै म्युजिक भिडियोमा यतिबेला रोजाईको मोड’ल बनेकी गरिमा फिल्ममा डेव्यु गर्ने उत्तम समय कुर्दैछिन् । नम्र स्वभावकी गरिमा सा’नैदेखि कला क्षेत्रमा लाग्न चाहन्थिईन्, त्यसका लागि उनलाई टिकटकले स’जिलो बनाईदियो ।
यसैबिच च’र्चित हास् श्रृँखला सक्किगोनिको पछिल्लो एपिसोडमा गरिमा देखा परिन् । पाहुना कलाकारको रुपमा आएकी गरिमाको अ’भिनय सबैले रुचाए । सन्देशमुलक एपिसोडमा गरिमा एक बलत्कृत युवतीको भुमिकामा देखिएकी छिन् । यसैबिच शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै गरिमाले सक्किगोनि अभि’नयको अनु’भव सुनाईन् ।- इताजा खबरबाट
कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चाराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल – हे’र्नुहोस्
June 7, 2021 admin समाचार 4843
कहि’लेकाहीँ जनावर र पशुपंक्षीले देखाउने ब्यबहार दुरुस्तै मिल्न जान्छन् । जनावर र पंक्षीले दुरुस्तै मानि’सको जस्तो दृश्य देखाउँदा कस्लाई पो हाँसो उट्ठैन र ? यस्तै दृश्य अहिले ट्वी’टरमा भाइरल बनिरहेको छ । जहाँ एउटा च’राको
October 5, 2020 admin समाचार 12742
March 3, 2021 admin समाचार 6465